AMISOM oo deeq Dawo ah gaarsiisay Hirshabeelle | CityFm
Home Wararka Maanta AMISOM oo deeq Dawo ah gaarsiisay Hirshabeelle
Ciidanka Burundi oo qeyb ka ah howl-galka nabad ilaalinta midowga Afrika Soomaaliya ee AMISOM ayaa deeq Dawo ah gaarsiiyay Magaalada Jowhar ee Caasimadda maamul Goboleedka Hirshabeelle.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo xuquuqul Insaanka Hirshabeelle, Sacdiyo Maxamed Nuur ayaa AMISOM uga mahad celisay deeqdan Dawada ah, iyadoo sheegtay in ay wax weyn ka tari doonto la dagaallanka Cudurka Corona Virus.
Marwo, Sacdiya ayaa xustay in deeqdani ay jawaab u ahayd codsi ay u jeediyeen howl-galka midowga Afrika xubno ka tirsan Bulshada maxalliga ah ee ku nool Magaalooyinka Jowhar iyo Mahaddaay, kuwaas oo ku tiirsanaa kaalmada caafimaad ee xarumaha AMISOM.
Madaxa Qaybta 5aad ee AMISOM, Captan ; Dr, Dionys Zabagenzi, ayaa sheegay in deeqdan loogu tala galay inay ka faa’iideysato Bulshada rayidka ah, maaddaama aysan awoodin in ay tagaan xarumaha AMISOM lana xiray goobihii ay ka heli jireen adeegyada Caafimaad.
Previous articleTababar loo furay Ciidamo ka mid noqonayo Daraawiishta Galmudug
Next articleSoomaaliland oo ka hadashay Dagaal ka dhacay Gobolka Sool.